Batman: Soul of the Dragon (2021) | MM Movie Store
ဒီနတေ့ော့ DC ရဲ့ ငဘတျဖနျတှအေတှကျ ၂၀၂၁ထှကျအသဈစကျစကျ ကားလေးလာပါပွီ။ ငယျငယျရှယျရှယျငဘတျလေးကို ဒီကားလေးထဲမှာတှရေ့ပါလိမျ့မယျ။ဇာတျလမျးအကဉျြးလေးက နန်ဒာပါဘတျလို့ချေါတဲ့ဂပြနျကလြှို့ဝှကျဘုနျးကွီးကြောငျးက ဆရာတျောအိုဆီမှာကိုယျခံပညာသငျဖို့ ငဘတျကလာခဲ့တာပေါ့။
ဆရာတျောအိုဆီမှာက ငဘတျအပါဆိုရငျတပညျ့က ခွောကျယောကျတောငျရှိပွီး ငဘတျကအငယျဆုံးလေးပေါ့။ မိသားစုဆိုရငျလြှို့ဝှကျခကျြမထားရဘူးလို့ပွောတဲ့ဆရာကကြောငျးထဲမှာရှိတဲ့ဂိတျတံခါးအကွောငျး တဈခါမှမပွောပွဘူးရယျ။
ဒီတော့ စပျစုစိနျတပညျ့မတဈယောကျကအငွိမျမနနေိုငျပဲဂိတျတံခါးကို သှားဖှငျ့ကွညျ့လိုကျမိတဲ့အတှကျကွောငျ့ ဆရာလညျးသသှေားတာပေါ့။ ဆရာသပွေီးနောကျ နှဈတှအေမြားကွီးကွာပွီးတဲ့နောကျမှာ ဂကျြဖာရီဘားရျဆိုတဲ့လူတဈယောကျက အဲ့ဂိတျတံခါးကိုနောကျထပျတဈကွိမျ ထပျဖှငျ့ဖို့ ကွိုးစားလာတဲ့အခါမှာတော့……….
ဘာဖွဈမလဲဆိုတာကိုတော့ထုံးစံအတိုငျးလေးကိုယျ့ဘာသာပဲကွညျ့လိုကျတော့နျော . . .Soul of the Dragon ဆိုတဲ့ အတိုငျး . နဂါးပုံရိပျတှပေါပါမယျ . မွနျမာတှရေဲ့ နဂါးလို့ပွောလို့ရမယျ့ နဂါးပုံရိပျတှလေညျး ဒီကားထဲမှာတှမွေ့ငျရပါမယျ။
ဒီနေ့တော့ DC ရဲ့ ငဘတ်ဖန်တွေအတွက် ၂၀၂၁ထွက်အသစ်စက်စက် ကားလေးလာပါပြီ။ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်ငဘတ်လေးကို ဒီကားလေးထဲမှာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးက နန္ဒာပါဘတ်လို့ခေါ်တဲ့ဂျပန်ကလျှို့ဝှက်ဘုန်းကြီးကျောင်းက ဆရာတော်အိုဆီမှာကိုယ်ခံပညာသင်ဖို့ ငဘတ်ကလာခဲ့တာပေါ့။
ဆရာတော်အိုဆီမှာက ငဘတ်အပါဆိုရင်တပည့်က ခြောက်ယောက်တောင်ရှိပြီး ငဘတ်ကအငယ်ဆုံးလေးပေါ့။ မိသားစုဆိုရင်လျှို့ဝှက်ချက်မထားရဘူးလို့ပြောတဲ့ဆရာကကျောင်းထဲမှာရှိတဲ့ဂိတ်တံခါးအကြောင်း တစ်ခါမှမပြောပြဘူးရယ်။
ဒီတော့ စပ်စုစိန်တပည့်မတစ်ယောက်ကအငြိမ်မနေနိုင်ပဲဂိတ်တံခါးကို သွားဖွင့်ကြည့်လိုက်မိတဲ့အတွက်ကြောင့် ဆရာလည်းသေသွားတာပေါ့။ ဆရာသေပြီးနောက် နှစ်တွေအများကြီးကြာပြီးတဲ့နောက်မှာ ဂျက်ဖာရီဘားရ်ဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်က အဲ့ဂိတ်တံခါးကိုနောက်ထပ်တစ်ကြိမ် ထပ်ဖွင့်ဖို့ ကြိုးစားလာတဲ့အခါမှာတော့……….
ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကိုတော့ထုံးစံအတိုင်းလေးကိုယ့်ဘာသာပဲကြည့်လိုက်တော့နော် . . .Soul of the Dragon ဆိုတဲ့ အတိုင်း . နဂါးပုံရိပ်တွေပါပါမယ် . မြန်မာတွေရဲ့ နဂါးလို့ပြောလို့ရမယ့် နဂါးပုံရိပ်တွေလည်း ဒီကားထဲမှာတွေ့မြင်ရပါမယ်။
Star Wars I : The Phantom Menace (1977)